Home Wararka Puntland oo sheegtay in xal Soomaali (Magdhow) lagu xalinayo dilkii Maryan Axmad
Puntland oo sheegtay in xal Soomaali (Magdhow) lagu xalinayo dilkii Maryan Axmad
Iyada oo ciidamada Puntland ay sanadkan kaliya ay dhowr qof ku dileen Puntland ayaa Dowlad Goboleedka Puntland waxa ay sheegtay in ay hoos loo dhaqi doono ama magdhow ay siin doonaan qoyska gabadhii dhallinyarada ahayd, ee ay habeen hore ciidamadeeda ku toogteen Magaalada Garoowe ee Xarunta Gobolka Nugaal.
Sida MOL horay idinkuugu soo gudbisay, Ciidanka Ilaalada Madaxtooyada Puntland ayaa rasaaseeyay gaari ay la socotay Maryan Axmed Maxamed, xilli wadada uu marayay Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni. Taliyaha Qaybta Booliska Gobolka Nugaal, G/sare Maxamed Aadan Jaamac ayaa sheegay in ciidamada ay si aan ku talagal ahayn u dileen gabadhaasi, ka dib markii ay ka shakiyeen wadihii gaariga oo damcay inuu ka cararo ciidamadii amniga sugayay.
“Ninka gaariga waday illaa iyo hadda waxaan fahmi la’nahay sababta uu ciidanka uga soo orday, inuu sasay (naxay) iyo in wax kale ka si noqdeen. Gaariga wadada ayuu taagnaa in laga dhaqaajiyaa la rabay, laakiin gaariga xaggii ciidamada buu ula soo orday.” Ayuu yiri Taliyaha oo intaa ku daray.
Waxa uu intaas ku daray “Ciidankuna rasaas bay huwiyeen, iyagoo ka taxadaraya inuu yahay dadka dhagarqabe-yaasha.”
Taliyaha ayaa sidoo kale yiri “Ninkaasi illaa iyo hadda wuu xiran yahay, waana la baari doonnaa, jawaab baana laga soo saari doonnaa sababta kaliftay inuu ciidanka oo la hadlaya uu haddana xagga ciidanka uu gaariga ula soo ordo, arrintaasi geeri baa ka qorneyd, gabadhaasi baana ku dhimatay. Gabadhaasna arrinteeda waa la dhammeeyay.”